Ejypta: Miala ny Mpangeja -Fizarana Fahatelo!! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2012 15:36 GMT
Amin'izay faritana ho andiany fahatelo amin'ny revolisiona Ejypsiana, nidina an-dalambe indray ny Ejypsiana manerana ny firenena fa tsy i Kairo ihany mba hampita hafatra goavana fa vonona izy ireo hanongana izay ho mpanao didy jadona hafa.
Nanomboka ny antso taorian'ny nanaovan'ny filoha Muhammed Mursi fanambarana vaovao – mampiadi-hevitra- mikasika ny volavolan-dalàm-panorenana izay manasokajy azy ho mpangeja vaovao ao Afovoany-Atsinanana. Niverina an-dalambe ny ejypsiana mba hanohitra ny fahefana mihoampampana ananan'i Mursi izay nomeny azy manokana. Araka ny filazan'ny tati-baovao, nahavita nanindry ny fitsarana i Mursi, nanambara izy fa tsy manana alàlana hanohitra ny fanapaha-keviny ny fitsarana. Nahatezitra ireo Ejypsiana izany, izay niverina nirohotra indray tao amin'ny kianjan'i Tahrir mba hanohitra izay lazainy ho “Farao (Pharaon)” vaovao ao Ejypta sy ny antokony Mpirahalahy Miozolomana, izay lazain'izy ireo fa manangona fahefana tafahoatra.
@ZeyadMourad: Taminà fanamarihana hafa: Nangataka ny vahoaka mba halehibiazina ny kianja
@thKool: Tsy anisan'ny sisa tavela ho an'ny fitondrana akory ireo antokon'ny seza. Fianakaviantsika ihany izy ireo, izay somary matahotra ny amin'izay mety ho voka-dratsin'n revolisiona, anisan'ny maro an'isa izy ireo izay tsy te hihetsika raha tsy hoe olana mikasika ny fiainana sy ny fahafatesana izany
@ikhwanweb: Manohana ny hetsika milamina izahay & fanoherana mafonja; nanambara ny mpanao fihetsiketsehana androany fa tsy mba misy ny fanohanana avy amin'ireo Ejypsiana tahaka ny tamin'ny #Jan25
Na ambony aza ny moraly ary fankalazana mahafinaritra ny fiverenana amin'ny fiainan'ny revolisiona, (metatra vitsivitsy miala avy eo) nitohy nandritra ny 8 andro ny fifandonana teo min'ny arabe Simon Boulevard amin'ireo nisy tamin'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny polisy. Voalaza tamin'ny tati-baovao fa fifandonana feno herisetra no niseho tao Mahalla teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpanohana ny MB.
@Ikhwanweb: Prez spox: tsy miova hevitra, mitoetra ny didim-panjakana, ho tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra sy ny tantara ireo izay tsy te hitondra fahombiazana
@RawahBadrawi: Tiako raha mikomy amiko ny firenena raha tsy manaja ny lalàna sy ny lalàm-panorenana aho.” – Muhammad Morsy (Mangataha dia homena ianao) #tahrir